घामको राप बढ्दैछ, यस्ताे गर्मीमा कुल लुक्स राख्न यस्तो छ काइदा - ज्ञानविज्ञान
वायुमण्डलमा तातो हावा चल्न थालेको छ । सुख्खा हावा र धूलो-धुँवा उड्न थालेको छ । यतिबेला तपाईंलाई यताउता हिँड्न गाह्रो हुँदो हो । शरीर पसिनाले निथु्रक्क भिज्न सक्छ । त्यसमाथि धुलो र धूँवाको लेप लाग्न सक्छ । त्यसैले तपाईंलाई केही गर्न जाँगर चल्दैन । अल्छी लाग्छ । तपाईंको फुर्ति एकाएक शिथिल हुन्छ ।
यो बद्लिदो मौसमबाट दिक्क हुने होइन । बरु यसलाई कसरी स्विकार्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसो हो भने तपाईंले यस्ता केही काइदा अपनाउन सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंको लुक्स कुल देखिनेछ । आलस्यता पनि हुनेछैन । शरीरमा बेग्लै स्फूर्ति एवं ताजगी महसुष गरिनेछ ।
गर्मीमा शरीरलाई शीतल राख्नुपर्छ । अर्थात वाह्य वातावरणसँग शरीरको तापमान सन्तुलित राख्नुपर्छ । जब तपाईं शारीरिक रुपले फिट रहनुहुन्न, पहिरन वा मेकअपले मात्र तपाईंले कुल लुक्स दिन सक्नुहुन्न । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो सर्त हो, स्वास्थ्य ।
गर्मीमा तपाईंले शरीरलाई भित्रैबाट सितल राख्नुपर्छ । यसको काइदा भनेको तरल पदार्थ सेवन हो । अर्थात पानी, जुस, सर्वत आदि पिउनुहोस् । गर्मीमा बजारको जुस वा प्याकेटबन्द जुस सेवन गर्नु त्यती राम्रो होइन ।
सर्बोत्तम चाहि सर्वत हो, जो हामीकहाँ विगतदेखि नै पिउने प्रचलन छ । त्यस्तै, दही, मोही पनि यतिबेला निकै उपयोगी पेय हुन् । गर्मीमा तातो पानी वा तातो पेय भने त्यती राम्रो हुँदैन । जस्तो कफी, चिया ।
यतिबेला मौसमी फलफूल सेवन गर्नु अरु बढी उपयोगी हुन्छ । ऋतु एवं मौसम अनुसार प्रकृतिले विभिन्न फलफूल उत्पादन गरेको हुन्छ । अतः यी मौसमी फलफूल शरीरका लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।
गर्मीमा शारीरिक सरसफाईमा अरु बढी ध्यान दिनुपर्छ । पसिना आउने र मैला जम्ने भएकाले नुहाइ-धुवाई गर्नुपर्छ । यसले गर्दा शरीरमा व्याक्टेरिया जम्न पाउँदैन । शरीरबाट दुर्गन्ध निस्कदैन ।
गर्मीमा चिसो पानीले नुहाउँदा बेग्लै स्फूर्ति पनि जाग्छ । खासगरी शरीरको कापमा, काखीमा फोहोर मैला जम्ने हुन्छ । त्यस्ता ठाउँको सफाईमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
पसिना र धुलोको लेप लाग्ने भएकाले छालाको रोमछिद्र बन्द हुन्छ । यसले गर्दा शरीर भित्रका विकार वाहिर निस्कन सक्दैन । त्यही कारण छालामा समस्याहरु देखापर्न थाल्छ । शरीरको भित्री विकारलाई हटाउन पनि नुहाई-धुवाई गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
गर्मीमा लगाइने पहिरनले पनि खास अर्थ राख्छ । फेसन विज्ञहरुका अनुसार यतिबेला सहज, खुला र उज्यालो रंगको पहिरन लगाउनुपर्छ ।
उज्यालो रंगको पहिरनमा घामको किरण परावर्तन हुन्छ । यसले गर्दा शरीरमा गर्मी अनुभव हुन पाउँदैन । फिटिङ्स लुगामा पसिना बढी आउने र असहज हुने भएकाले खुला लुगा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यद्यपी शरीर खुला राख्नु भने त्यती ठिक हुँदैन । पुरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनुपर्छ, खासगरी घरबाहिर निस्कने बेलामा । उज्यालो रंग, खुला पहिरनले गर्मीमा कुल लुक्स दिन्छ ।
गर्मी सिजनमा तपाईंको लागि सबैभन्दा उपयोगी हुनसक्छ, छाता । यसको उपयोगिता घाम चर्किएको बेला मात्र होइन, पानी दर्किएको बेला पनि हुन्छ ।
गर्मीमा हिँडडुल गर्दा छाता ओड्न सकिन्छ । यसले घामको सोझो प्रकाश शरीरमा पर्न दिदैन । साथसाथै सितलता पनि महसुष हुन्छ । यो सिजनमा पानी पर्ने संभावना पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले पानी परेको बखत छाता उपयोगी हुन्छ ।
गर्मीमा कपालको साजसज्जा पनि केही बदल्न सकिन्छ । खासगरी पुरुषले कपाल छोटो बनाउन सक्छन् । हेयर स्टाइलिस्टहरुका अनुसार गर्मीमा छोटो कपाल बनाउँनु बढी सुहाउँदो हुन्छ । त्यस्तै महिलाले कपाललाई पातलो सल वा स्कार्फले ढाक्न सक्छन् । यसले गर्दा कपालमा धुँवा धूलो जम्ने डर हुँदैन ।
गर्मीमा स्टाइलिस देखिन मात्र होइन, आँखाको रक्षाको लागि पनि सनग्लास लगाउनुपर्छ । यसले कुल लुक्स दिलाउनका साथै आँखालाई धुलो धूँवाबाट जोगाउँछ ।
बनारमा उपलब्ध विभिन्न व्युटी प्रोडक्टद्वारा अनुहारलाई आकर्षक बनाउन त सकिन्छ तर त्यस्ता प्रोडक्टको प्रभाव क्षणिक हुने गर्छ । यसको सट्टा प्राकृतिक रूपमै उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका खानेकुराको सेवन गरेर अनुहारमा प्राकृतिक एवं दीर्घकालीन सौन्दर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अनुहार, छाला तथा सम्पूर्ण शरीरलाई स्वस्थ एवं आर्कषक राख्न सकिने त्यस्ता खानेकुरालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘व्युटी फुड्स’ भन्ने गरिन्छ । व्युटी फुड्सको नियमित सेवनले रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छ, छालाको कोषिका स्वस्थ हुन्छ र अनुहारको सुन्दरता वृद्धि हुन्छ । यस्ता खानेकुराको सेवनले लामो समयसम्म जवान तथा सुन्दर देखिन सकिन्छ ।
क्याल्सियम तथा फस्फोरसको खानी दहीले दाँतलाई मजबुती प्रदान गर्नुका साथै दाँतको क्याविटी हुनबाट बचाउँछ । दहीको नियमित प्रयोगले छाला चम्किलो हुनुका साथै नरम हुन्छ । यसले ओस्टियोपोरोसिस हुनबाट समेत रोक्छ ।
दहीलाई फेसमास्कको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सफा अनुहारमा फिटेको दही करिब दश मिनेटसम्म मालिस गरी लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ ।
सुन्दर रहन कुन भिटामिनको के भूमिका
सुन्दर रहन चाहाने सबैकालागी जानकारी कुन भिटामिनको के भूमिका ?, छालालाई पुन मर्मत गर्न भिटामिन एको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भिटामिन ए खानेकुरामार्फत प्राप्त गर्न खानामा ब्रोकाउली, एभोकाडो, सख्खरखण्ड, गाजर, पालुङ्गो, तरबुजा वा खरबुजा नियमित सेवन गर्नुपर्छ ।
भिटामिन बीमा नायसिनआइड नामक तत्व पाइन्छ जुन मानिसका लागि अति नै गुणकारी हुन्छ । भिटामिन बीयुक्त क्रिम तथा लोसनले अनुहारमा देखापर्ने रातोपन वा खराबी निर्मूल पार्छ । भिटामिन बी कुखुराको मासु, टुना, सलगम, बदाम, ब्राउन राइस, हरियो केराउ, जौ, च्याउ, खरबुजा एवं सनफ्लावरको दाना आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भिटामिन ईले छालालाई हानिकारक कीटाणुहरूबाट जोगाउँछ । छालालाई हरेक कुराबाट सुरक्षा प्रदान गर्न भिटामिन ईको ठूलो भूमिका हुन्छ । भिटामिन ईले क्लोजन उत्पादन गर्छ र बूढो हुँदै गएको छालालाई तरोताजा राख्छ । भिटामिन ई प्राप्त गर्न बदाम, अण्डा, काँचो मेवा, हरियो साग, अनाज आदि खानेकुरा खानुपर्छ ।
भिटामिन सीमा छालामा चमक पैदा गर्ने तत्व हुन्छ । यसले दाग–धब्बालाई पूर्णरूपमा हटाउँछ । यो भिटामिनले क्लोजनको निर्माण गर्छ । एभोकाडो, ब्रोकाउली, टमाटर, काँक्रा, कागती, स्ट्रबेरी आदिबाट भिटामिन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मुलाको प्रयेाग यसरी गर्नूहोस र अनुहारको डन्डिफोर, दाग वा पोतो देखी तन्दुरुस्त हूनुहोस
प्राकृतिक पाचक हो मुला, मुलाले भोज्य पदार्थ सजिलै पचाउँछ । आयुर्वेदले पनि यसलाई पाचक समेत भनेको छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई सुचारु र मजबुत राख्छ । अनेक रोगका कीटाणुलाई शरीर बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
मुलामा किसिम किसिमका खनिज पदार्थ पाइन्छन् । यो रक्त शोधक समेत हो । आयुर्वेद अनुसार, मासिक धर्ममा गडबडीका कारण अनुहारमा डन्डिफोर निस्कने समस्याबाट ग्रस्त युवतीहरूले दिनहुँ मुला खानु लाभदायक हुन्छ ।
मुलाले रगत सफा मात्रै गर्दैन, रक्त सञ्चारमा समेत लय ल्याउँछ । यसले छालामा भएका दाग वा पोतो निको पार्छ । मुलामा गन्धक हुन्छ, त्यसैले यसको गन्ध नै धेरै प्रकारका रोग निको पार्न सहायक हुन्छ ।
मुलामा भिटामिन ‘ए’ पनि पाइन्छ । त्यसै कारण यो तरकारी आँखाका लागि फाइदाजनक छ । आयुर्वेद अनुसार, जाडो याममा सधैं बिहानपख एउटा मुला खानेहरूको आँखाको ज्योति वृद्घावस्थासम्म राम्रो हुन्छ, आँखालाई अन्य रोगले पनि हतपती सताउँदैनन् ।
अब त गर्मी याम लागिसक्यो, तैपनि मुला सेवन गरी अनेकानेक फाइदा लिन सकिन्छ । मुला हरेक प्रकारको पाइल्स -बवासिर) हटाउन लाभदायक मानिन्छ । मृगौलाको खराबीले पिसाब बन्न बन्द भए मुलाको रस सेवन गर्नु अत्युत्तम
हुन्छ । यो मधुमेहमा पनि लाभकारी हुन्छ । यो हरेक मौसममा पाइए पनि चिसो याममा पाइने चाहिँ उत्तम गुणस्तरको मानिन्छ ।
मुला नियमित सेवन गर्ने व्यक्ति स्वस्थ, उत्साहित एवं उमंगले भरिपूर्ण हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । यसले शरीरको गुमेको ऊर्जा फिर्ता ल्याउन सहायता गर्छ । छालामा चाउरी भएकाहरूले सधैंसधैं मुला खाने गरे शरीरको चमक पूर्ववत् हुन बल मिल्छ ।
एक सय ग्राम मुलामा प्रोटिन ०.७ ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ३.४ ग्राम, बोसो ०.१ ग्राम, ऊर्जा १७ मिलिग्राम, खनिज ०.६ ग्राम, क्याल्सियम ३५ मिलिग्राम, फाइबर ०.८ ग्राम, फस्फोरस २२ मिलिग्राम, नायसिन ०.५ मिलिग्राम, भिटामिन सी १५ मिलिग्राम, आइरन ०.४ मिलिग्राम, क्यारोटिन ३ मिलिग्राम, थायमिन ०.०६ मिलिग्राम, राइबोफ्लोबिन ०.०२ मिलिग्राम र पानी ९४.४ ग्राम हुन्छ । त्यसैले, सधैं मूला खाऔं, सधैं तन्दुरुस्त रहौं ।
छाला सुन्दर बनाउनु छ भने यी पाँच वनस्पति प्रयोग गर्नुहोस
सबैलाई राम्रो र सुन्दर हुन मन हुन्छ। राम्रो हुनको लागि महँगो खालको क्रिम लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । आफुले अलिक बडी ध्यान दियो भने हुन्छ । यसका लागि घरेलु उपाय अपनाएर पानी छालालाई रेखदेख गर्न सकिन्छ ।
Don't Miss it खाने होइन त अमृत भोजन ? यी खानेकुरालाई काँचै खाएको राम्रो – जान्नुहोस्
Up Next मृत्युपछि के हुन्छ ? गौतम बुद्धको यस्तो थियो जवाफ – जान्नुहोस् बुद्दको १० महान भनाईहरु